Ushicilelo lukanomathotholo oluthetha ngendima yamanina kwimibutho yabasebenzi kwizwekazi le Afrika – Elitsha
22nd August 2017 Mzi VelapiEzasemisebenzini, Iyavela, Uncategorised 0 Xhosa
Umfanekiso oqingqiweyo obonisa indima edlalwa ngamanina kumzabalazo. Umfanekiso uthathwe kwi www.saha.org.za
Kudala abantu abangomama badlala indima ebalulekileyo emzabalazweni. Abantu abangomama abangathathi-ntweni abamnyama babephambili kumzabalazo wokuthathwa kwezwekazi ngabo bamhlophe ababesuka eYurophu. Ingxelo yamazwe asibhozo eyenziwe yi African Labour Research Network iveza ukuba bambalwa abantu abangomama kwimibutho yabasebenzi nangona ingabona abaninzi.
Esi siqendu silandelayo saqulunqwa ngonyaka ka 2014 kwaye sithetha ngezizathu ezibangela ukuba abantu abangomama bangathathi inxaxheba kwimibutho yabasebenzi kwaye zintoni ezibangela ukuba bangathathi izikhundla zobunkokheli.
Imibutho yabasebenzi yeyona inokwazi ukulwela ukucinizelwa kwamanina kwaye ukuba benza ngendlela akunakuphelela kwimiqulu koko ingayinto enokuqala endaweni zemisebenzi inwenwele ekuhlaleni. Le mibutho yabasebenzi kufanele ifake uxinizelelo kwabo baphetheyo ukutshintsha imeko yokuphila yamanina ukuze akwazi ukuthatha inxaxheba ngokukhululekiyo kwizinto zoluntu.
Also read: Inkqubo kanomathotholo ejongene nabantu abangomama abasebenza emigodini
Ushicilelo lukanomathotholo oluthetha ngabahlolokazi base Marikana